Ọrịa akwara | Ọkọwa Okwu Ahụike
Ihe ị ga-amata Banyere Bystander CPR na Coronavirus Risk
Ọrịa COVID-19 agbanwebeghị eziokwu na ndị bịara ya na-arụ ọrụ dị mkpa iji melite ọnụego nlanarị maka njide obi. Mana ịnye CPR nke nwere ike ịzọ ndụ, chọrọ nchebara echiche ọzọ n'etiti nsogbu coronavirus, dịka ntụzi aka nwa oge si na American Heart Association.
Onye Ọkpụkpụ Obi na-ekweta nnukwu mmejọ banyere ihe kpatara ọrịa artery:
"Anyị ndị dibịa nwere ọzụzụ anyị niile, ihe ọmụma na ikike anyị na - enweta nnukwu ego nke na - eme ka ọ sie ike ikweta na anyị adịghị mma."
“Mbufụt” dị n’aara akwara bụ ihe na-akpata ọrịa obi
Mgbochi Ọgụgụ Obi
Ebenezer Yeboah Nwere ike 22, 2020
Obi nkolopu. Ọbara obi na - aputa ihe mgbe obara obara nke obi rue mgbochi. Agbanyeghi na otutu oria akwara na ebuso nsogbu nke nkụchi obi, mbo agha bu ihe adabaghi, dika nyocha emere nke e gosiputara taa na Nlekota Nkpuru obi nke America & Nsonaazụ Nchọpụta Sayensi 2020
Ndị ọrịa COVID-19 nwere ike ịnwe ọnụego ọrịa strok dị ala karịa ka a tụrụ aro na mbụ
Ọ bụ mmadụ ole na ole karịa ka a kọrọ na mbụ na-arịa ọrịa strok n'ihi COVID-19, nyocha ọhụrụ na-achọpụta. Agbanyeghị, ọrịa strok na-eso oria ojoo a, SARS-CoV-2, na-egosi ka ọ ka njọ. […]
Ọbara mgbali elu Mgbe Emechara Ọgwụ Nwere ike Marbụ Ihe Omuma Ọrịa N’oge Ndụ
Ebenezer Yeboah Nwere ike 20, 2020
Ọbara mgbali elu Mgbe mgbatị ahụ na oge gbakere mgbake ọbara mgbatị ahụ mgbe mgbatị ahụ jikọtara ya na ohere nke ọbara mgbali elu, klọọkụị na ọrịa akwara na ọnwụ […]
Immunotherapy, steroid nwere ezigbo ihe ga-arụpụta na ụmụaka nwere CLUID metụtara ọnụọgụ sistemụ mkpali ọrịa.
Withgwọ ya na ọgwụ mgbochi ọcha sachara ọbara enyere aka - ọgwụ mgbochi globulin-steroid wee weghachi ọrụ obi n'ọtụtụ ụmụaka yana COVID metụtara multi-system inflammatory syndrome, dịka nyocha ọhụrụ e bipụtara ụnyaahụ […]
Walgagharị ma ọ bụ ịgba ịnyịnya na-arụ ọrụ metụtara obere ọnwụ nke ọrịa na ọrịa
Ndị na-aga ije, na-aga njem ma na-eji ụgbọ okporo ígwè aga ọrụ na-ebelata ohere ha nwere ịnwụ ma ọ bụ ọrịa tụnyere ndị na-eji ụgbọ ala aga. * Isi mmalite
Mmeghachi omume ọkachamara gbasara oke nhachi ọbara gbasara ndị ọrịa COVID-19
Na ngwụcha izu a, BBC kọrọ na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrịa COVID-19 nwere ọnya ọbara dị ize ndụ. Ọ bụ ezie na ọgwụgwọ ndị dị ugbu a na-elekwasị anya na mgbochi malitere ịrịa ọrịa na ọgwụ mgbochi mkpali, ndị a naanị […]
Mkpụrụ ọgwụ anticoagula taara na-ejikọtara ya na obere ihe mgbaze ma e jiri ya tụnyere warfarin maka ndị ọrịa nwere ọrịa AF
Direct anticoagulants oral (DOAC) nwere njikọ dị ala na nsogbu nke osteoporotic fracture ma e jiri ya tụnyere warfarin maka ndị ọrịa nwere ọnya fibrillation (AF). Enweghị ọdịiche dị n'etiti DOAC maka nnukwu mgbaji […]
Coronavirus - Onwekwu Nsogbu Nke Ọrịa
Ebenezer Yeboah Nwere ike 19, 2020
Etu ole mbibi ọ dị na-adabere na mpaghara ụbụrụ, ihe kpatara ọgbụgba na, nke kachasị mkpa, ka esi agwọ ndị ọrịa ngwa ngwa iji weghachi ọbara ọbara. Na-enweghị ọgwụgwọ, neurons 1.9 na-emebi emebi kwa nkeji mgbe mgbaàmà ọnya malitere.